Onyinye Seychelles na -akwụghachi azụ: Ebe njedebe agwaetiti kacha elu na Africa na Middle East
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Onyinye Seychelles na -akwụghachi azụ: Ebe njedebe agwaetiti kacha elu na Africa na Middle East
Awards • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem Seychelles + Ntụrụndụ
Seychelles emeriela asọmpi ọzọ ka ọ na -agbago nke ugboro anọ, ihe nrịba ama Travel + Leisure 2021 World Award dị ka ebe kacha elu n'agwaetiti n'Africa na Middle East.
Otu onye njem na -agụ oge ezumike kọwara Seychelles dị ka "ihe ịtụnanya nke asatọ n'ụwa."
Ebe a pụtara na ọkwa ya kachasị elu, wee were isi 88.
A maara Seychelles nke ọma maka ebe echekwara echekwara nke ọma dị ka Vallée de Mai, otu n'ime saịtị agwaetiti UNESCO nke agwaetiti 115 nke raara nye mmadụ.
N'ịkọghachi ebe Nọmba 1 (nke ọ nwekwara na 2019), Seychelles, paradaịs mara mma nke edobere na Oke Osimiri India, yana "ihe ịtụnanya nke asatọ nke ụwa" dịka otu onye na -agụ Njem + Ntụrụndụ ji mara ya, na -eto ya maka "ọmarịcha ya. , ”Pụtara n'ọkwa mbụ ya, na -enweta isi 88, Zanzibar na Mauritius na -esote ya n'ọkwa nke abụọ na nke atọ n'otu n'otu.
Ngosipụta nke afọ a dị anya dịka ọ dị na mbụ, ka akwụkwọ akụkọ kwuru, na-ekwupụta nsonaazụ nyocha ahụ nke na-enye ndị na-agụ ohere ịtụgharị uche na ahụmịhe njem ha, ma tụọ aro maka ekele maka ebe na-enye ịma mma eke na-enweghị atụ na, n'ọtụtụ ebe, ole na ole ìgwè mmadụ. Ịsọpụrụ onyinye a na -akpalikarị ndị njem ka ha na -achọ ahụmịhe kachasị akwụghachi ụgwọ gburugburu ụwa.
Osisi ahịhịa na-ama mma nke ukwuu, ụsọ mmiri na-acha ntụ ntụ, ọmarịcha, ọnọdụ osisi na mmiri turquoise doro anya, ndị Seychelles a makwaara nke ọma maka ebe echekwara echekwara nke ọma dị ka Vallée de Mai, otu n'ime saịtị agwaetiti UNESCO nke agwaetiti 115 nke agwaetiti mmadụ raara nye, ahịhịa na anụ ọhịa ya pụrụ iche na ogige mmiri ya, nke niile masịrị Njem & njem. Ndị na -agụ ntụrụndụ.
N'ikwu okwu banyere nturu ugo a, Oriakụ Bernadette Willemin, Director General maka ịre ahịa Njem nlegharị anya Seychelles kpọtụrụ aha na ịnweta ụdịrị nkwanye ugwu dị otú ahụ bụ nsọpụrụ maka ebe ị na -aga.
“Ịkpọ aha agwaetiti kacha mma n'ụwa n'afọ 2021 n'Africa na Middle East, bụ ihe na -enye ọ forụ maka obere ebe anyị na -aga. Ọ bụ ihe na -emesi obi ike maka ụlọ ọrụ n'ozuzu ya ịmara na ndị ọbịa anyị na -amata ọmarịcha agwaetiti anyị kamakwa ahụmịhe niile na -eme ka anyị bụrụ ndị pụrụ iche na 'ụwa ọzọ.' ”
Nhọpụta nke ebe pụrụ iche na-esite na nyocha nke Travel + Leisure na-eme kwa afọ, nke na-enye ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ njem njem New York aka ịtụle ahụmịhe njem ha gburugburu ụwa. Ndị na -agụ akwụkwọ na -atụle oke ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, agwaetiti, obodo, ụgbọ elu, ahịrị ụgbọ mmiri, spas, na ndị ọzọ, na -ele agwaetiti anya na njirimara ndị a: ebe nkiri na osimiri, ihe omume na nlegharị anya, ụlọ oriri na ọ foodụ andụ na nri, ndị mmadụ na omume enyi, yana ọnụ ahịa niile. Seychelles kekọtara na Nr 24 ya na Sri Lanka n'agwaetiti kacha elu nke akwụkwọ akụkọ na onyinye ụwa.
Nnyocha onyinye onyinye kacha mma nke afọ a mepere maka ịtụ vootu Jenụwarị 11 ruo Mee 10, 2021, ebe ndị njem gburugburu ụwa na-ebuli mmachi COVID-19.